Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Madaxa Shiinaha iyo Qoorta | Zhancheng
Baakadaha qalliinka waxaa si gaar ah loogu talagalay inay ku jiraan wax kasta oo loo baahan yahay si loo sameeyo noocyo gaar ah oo ah hababka qalliinka. Waxay yihiin baakado madhan si loo badbaadiyo waqtiga loona yareeyo kharashaadka dejinta qolka qalliinka. Baakad kasta waxaa ku jira alaab qalliin iyo xaashi fure u gaar ah oo hab-gaar ah leh.
Tayada ugu sarraysa iyo dhegista xirmada qalliinka & dahaarka qalliinka ayaa ah ikhtiyaarka ugu habboon dhammaan noocyada qalliinka. Kuwani waxaa si aad ah loogu adeegsadaa isbitaalada kala duwan inta lagu guda jiro qalliinnada si loo siiyo qalabka raaxada qolka isbitaalka. dhiiga, dheecaanka jirka iyo soosaarka bukaanka, oo leh caabuq iman kara, ayaa si fiican loo hor istaagi karaa si looga hortago caabuqa bakteeriyada
Xidhmada qaliinka dhalmada siilka oo aan la iska tuuri karin ayaa loo isticmaalaa badbaadin hal mar ah inta lagu jiro qaliinka dhalmada siilka ee isbitaalka. Waxay ka kooban tahay qaybaha loo baahan yahay hawlgalka kuwaas oo si wax ku ool ah u hor istaagi kara dareeraha iyo bakteeriyada gelinta waxayna ka hortagtaa caabuqa iskutallaabta. Halabuurka gaarka ah ayaa la dooran karaa oo la habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Xidhmada qalliinka dhalmada ee siilka oo madhan waxay leedahay faa'iidooyin nuugis xoog leh, diidmada wasakhda iyo hawo wanaagsan, taas oo nuugi karta dhammaan agabyada qashinka ee hawlgalka qalliinka bukaanka hal mar isla markaana si wax ku ool ah u tirtiri kara caabuqa iskutallaabta.
1, Way fududahay in la isticmaalo, adeegsiga hal mar, iyada oo aan dib-u-warshadayn iyo nadiifin;
2, La kulmo shuruudaha deegaanka, ay fududahay in la xaalufiyo ama la gubo;
3, Isticmaalka alaabta ceyriin oo tayo sare leh, ma jirto sumoobo, ma daadin fiber, iyo heer sare oo iska caabinta bakteeriyada. Iyada oo leh astaamaha saddexda iska-caabbinta: khamriga ka-hortagga, ka-hor-tagga, ka-hortagga plasma;
4, Qaybaha muhiimka ahi waxay leeyihiin sifooyin dareere ah oo aan nadiif ahayn oo ka hortag ah, waxaana lagu hagaajin karaa bacaha ururinta dareeraha;
5, Si wax-ku-ool ah uga hortagga is-qaadsiinta isbitaallada, yarayso kharashyada qarsoon ee daaweynta, iyo kordhinta xakamaynta heerka caabuqa;
6, Saamaynta jeermis -diliddu waa mid la isku halleyn karo, muddada dhalmada ayaa ka dheer;
Tuwaalka Gacanta (30 × 34cm)
Goonnada Qaliinka ee caadiga ah (125 × 150cm)
Goonnada Qalliinka ee La Xoojiyay (125 × 150cm)
Kala -bax Dheecaan (180 × 290cm)
Xadhigga madaxa (100 × 100cm)
Xadhiga Koollada (130 × 115cm)
Boorsada Suunka (16 × 29cm)
Daboolka Miiska Qalabka (150 × 190cm)
Daboolka Mayo Stand (80 × 145cm)
Maaskaro Wajiga Warbaahinta
Gacanta Gacanta (40 × 40cm)
Goonnada Qalliinka ee La Xoojiyay
Daboolka Miiska Qalabka
Daboolka Weelka Qalabka
Daloolka godka (Jilibka)
Daloolka godka (gacanta)
Xidhmada Qalliinka misigta
Qalabka Koollada (10 × 50cm)
Goonnada Qalliinka (oo la xoojiyay)
Mark qalin qalin
Hore: Xidhmada Qalliinka
Xiga: Xidhmada Indhaha
Xidhmada Qalliinka Guud
Baakado Qalliin oo Sterile ah
Xidhmooyinka Habka Qalliinka
Xidhmada Hawlgalka Dhexgalka